ऋषिङ म्याराथनः पहिलो भए तीर्थ तामाङ – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun ऋषिङ म्याराथनः पहिलो भए तीर्थ तामाङ – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
ऋषिङ म्याराथनः पहिलो भए तीर्थ तामाङ
२७ पुष २०७८, मंगलवार १३:००
ऋषिङ म्याराथन २
ऋषिङ: दोस्रो ऋषिङ अल्ट्रा म्याराथन प्रतियोगितामा धावक तीर्थ तामाङ पहिलो भएका छन् । कुल ४३ किलोमिटर दूरी दुई घण्टा ५१ मिनेटमा पूरा गरेर उनले विजेताको उपाधि पाएका हुन् ।
यसैगरी धावक देवराज महतारा दोश्रो हुन सफल भएका छन् । उनले दूरी २ घण्टा ५४ मिनेट २५ सेकेण्डमा दूरी पुरा गरे । यसैगरी, सुमन कुलुङ राईले दूरी तीन घण्टा पाँच मिनेट ४६ सेकेण्डमा दूरी पुरा गरेर तेश्रो उपाधि पाए ।
गाउँपालिकाको आयोजनामा सञ्चालित म्याराथनको दोश्रो श्रृंखलामा उनीहरु विजेता भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता विजय दरैले दमौली न्यूजलाई जानकारी दिए ।
प्रतियोगितामा महिलातर्फ सीता रानाभाटले ४ किमी दौड १० मिनेट १७ सेकेण्डमा पूरा गरेर पहिलो भएकी छन् । यसैगरी यमुना थापा १० मिनेट १९ सेकेण्डमा पुरा गरेर दोश्रो तथा विष्णु परियार १० मिनेट २५ सेकेण्डमा पूरा गरेर तेश्रो भएका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २७ पुष २०७८, मंगलवार १३:०० 34 Viewed